Smashwords – Wakaberekwa Patsva neMvura Uye noMweya Zvamazvirokw azvo Here? – a book by Paul C. Jong
Chinyorwa chino chinonyanya kubata "Nezvekuzvarwa patsva nemvura nemweya". Ndiwo mavambo echinyorwa chino. Nemamwe mashoko, bhuku rino, rinoburitsa pachena kuti kuzvarwa patsva zvinorevei uye kuti unozvarwa sei nemvura nemweya zvichinyatso enderana neBhaibheri. Mvura ino miririra kubhabhatidzwa kwaJesu pana Jorodhani uye Bhaibheri rinoti iro ,zvitadzo zvedu zvose zvakaiswa pana Jesu apo paakango More
Chinyorwa chino chinonyanya kubata "Nezvekuzvarwa patsva nemvura nemweya". Ndiwo mavambo echinyorwa chino. Nemamwe mashoko, bhuku rino, rinoburitsa pachena kuti kuzvarwa patsva zvinorevei uye kuti unozvarwa sei nemvura nemweya zvichinyatso enderana neBhaibheri. Mvura ino miririra kubhabhatidzwa kwaJesu pana Jorodhani uye Bhaibheri rinoti iro ,zvitadzo zvedu zvose zvakaiswa pana Jesu apo paakango bhabhatidzwa naJohane mubhabhatidzi. Johane aiva mumiriri w emarudzi ose uye ari wedzinza raAroni mushumiri mukuru. Aroni aiturika maoko ake pamusoro wembudzi kuti aise zvitadzo zvose zvepagore zvava Israyera nezuva rokuwadzaniswa. Unova waiva mumvuri wezvakanaka zvainge zvichauya. Kubhabhatidzwa kwaJesu kwai fananidzira kuturikwa kwamaoko pana Jorodhani. Nokudaro akatora zvitadzo zvose zvapasi rino nokubhabhatidzwa kwake uye akaroverwa kuti aripe zvitadzo, Asi vatendi vazhinji havazivi kuti sei Jesu akabhabhatidzwa naJohane mubhabhatidzi munaJorodhani. Kubhabhatidzwa kwaJesu ndiro shoko guru riri mubhuku rino, uye chiri chikamu chakakosha pavhangeri remvura nemweya. Tinogona kungozvarwa patsva chete kana tichitenda mukubhabhatidzwa kwaJesu uye nemuchinjikwa wake.
Tags: bhapatidzo chivi jesu kristu kuberekwa patsva kuisa maoko kuregererwa kwezvivi kutendeuka ruponeso yananisiro